မြင်းမိုရ်ဦး: Thesis template မျှဝေခြင်း
Thesis template မျှဝေခြင်း
မြန်မာပြည်မှာ မာစတာတန်းတက်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များက thesis ရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးလာကြတာရယ်၊ နိုင်ငံခြားရောက်နေကြတဲ့ပညာသင်ကျောင်းသားကျောင်းသူမိတ်ဆွေတွေလည်း လိုအပ်တဲ့သူ download လုပ်နိုင်အောင်ရယ်၊ Thesis template ကို Word 2003 , Word 2007တွေနဲ့မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
စရေးချိန်မှာတော့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းလိုက် Word ဖိုင်ခွဲဖွင့်ရေးတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Thesis ကြီးတစ်ခုလုံးကို format ထဲမှာတစ်ခါတည်းရေးလိုက်ရင်၊ အပိုင်းလိုက်ဖြည့်ရေးချင်တဲ့အခါ စာလိုက်ရှာနေရတာနဲ့အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ဖိုင်တစ်ခုချင်းစီမှာဘဲ လိုတဲ့နေရာတွေကိုနည်းနည်းစီဖြည့်ရေးသွားလိုက် save လုပ်ထားလိုက်နဲ့ အားလုံးရေးပြီးသွားလို့စုံပြီဆိုတော့မှ တစ်ပိုင်းချင်းကို Thesis template ထဲမှာ သူ့နေရာနဲ့သူ copy-paste လုပ်လိုက်ရင် အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်။ Thesis template မှာ ပါဝင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ Thesis ဂုဏ်အင်္ဂါနဲ့ညီအောင် စာမျက်နှာနံပါတ်တပ်တာကအစ ရှေ့ပိုင်းမှာ roman letter (i, ii, iii) စသည်ဖြင့်တပ်ပေးထားပြီး စာတမ်းစတဲ့စာမျက်နှာကစလို့ arabic letter (1, 2, 3...) နဲ့ပေးထားပါတယ်။ ဒီလိုနှစ်မျိုးခွဲပြီးစာမျက်နှာနံပါတ်တပ်တာကအစ၊ နည်းလမ်းမသိရင် အချိန်ကုန်လို့၊ ကျွန်တော်တွေ့ထားတာနဲ့ အဆင်သင့်သုံးလို့ရအောင်တင်ပေးထားတာပါ။ graph, tables, figures တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆွဲပုံဆွဲနည်း၊ ဓာတ်ပုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး figure အနေနဲ့တင်ဆက်နည်း၊ graph တွေဂျာနယ်တင်တဲ့အခါ resolution မကောင်းတတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဖိုင်ဆိုဒ်သေးပြီး resolution ကောင်းတဲ့ပုံတွေပြုလုပ်နည်းစတာတွေလည်း၊ နောက်သိလိုတဲ့သူတွေမေးလာရင် ပို့စ်တင်သွားပါမယ်။
စာတမ်းကိစ္စတွေမှာ အထောက်အကူလေးရသွားတယ်ဆိုရင် ပညာဒါနပြုရကျိုးနပ်ပါပြီ။
Posted by Dr. Nyan at 7:26 AM
That's very helpful.I am alsoaPhD student:)) Thanks heaps.
It is also supportive. Thanks again.
Regards, Mar Mar
Umm... like that?